Okuphindwe kabini okusemgangathweni @ Ihotele iBelvena
Relax, ukutshaja kwakhona iibhetri zakho kwaye uzive ngathi ulikhaya kwindawo yangoku, ecocekileyo, enencasa nekhuselekileyo efumaneka ePalembang. Le yunithi ibandakanya uluhlu olubanzi lwezinto eziluncedo ezinje, ugcino lwemihla ngemihla, isicima-mlilo, ukuPaka, iGeyser, ukugcinwa kombane, ukuHlala. Indawo, i-wi-fi, isinxibo sangoku, i-Ac, indawo yokungena yaBucala, iTV, kunye neekhamera zeCCTV kwiindawo zikawonke-wonke.
I-OYO 1273 Ihotele i-Belvena yipropathi ekumgangatho ophezulu kwaye enencasa ene-decor ethokolisayo nenomtsalane enika indawo efanelekileyo yokuhlala kwizibini kunye neentsapho. Ime kwisiXeko sasePalembang, lo mhlaba ukufuphi nePalembang Trade Square (PTC Mall).
Ipropathi inendawo yokungena enomtsalane enesofa ezisefashonini. Amagumbi athetha ngesivakalisi esinomtsalane kwaye enziwe kakuhle ngomgangatho weplanga, ifenitshala entle, kunye neefestile ezinkulu.
I-AC, iTV, ifriji encinci, kunye neendawo zokuhlala zikhona emagumbini ngelixa igumbi lokuhlambela licocekile. Ezinye izibonelelo ezibonelelwe yile propati ziquka ukhuseleko lweCCTV, ulwamkelo, iWiFi yasimahla kunye neendawo zokupaka.
Iindwendwe zingonwabela izimuncumuncu ezahlukeneyo kwiindawo zokutyela ezikufuphi ezizezi: McDonald's, Rendezvous Dine And Drink, Bingen Cafe Palembang, Pempek Cek Tasya, Indie Cakes Palembang, Pempek Wawa, kunye neCanton Park.
Ibala lezemidlalo laseBumi Sriwijaya
Imbaleki Village Jakabaring Palembang
Ibala lezemidlalo laseGelora Sriwijaya
I-Jakabaring Aquatic Stadium
Iindawo zokutyela kunye neekhefi
Indawo yokutyela RM Samo Raso
Indawo yokutyela eSlawi
Indawo yokudlela yaseRumah makan Musi Raya
ICafe / ibha yokubhaka yaseFransi kunye neresto
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kecamatan Ilir Timur II